Bishii Meey 25, metrooga magaalada Kiev iyo Kharkov ayaa bilaabay inay mar kale shaqeeyaan; Go'aan ku saabsan hawlgalkii metroga ee Dnipro ayaa la filayaa maanta. Taranka mitrooga ee Ukraine wuxuu joojiyey badhtamihii bishii Maaris sababtuna ahayd cudurka dillaaca coronavirus. Metro ee kiev [More ...]
In kasta oo coronavirus si xun u saamayso qaybo badan oo xun, dalxiis ayaa marka hore yimaadda. Xirfadlayaasha dalxiiska ayaa leh fikirka ah in xitaa haddii halista coronavirus la baabi'iyo, nabarrada aan sanadaha badan laga bogsan doonin dalxiiska. Dhanka kale, dalxiisayaasha ayaa caan ka ah dibedda sidii hore. [More ...]
Shirkadda El-Al Israel ee fadhigeedu yahay Israel ayaa joojisay duullimaadyadeedii ay ku tagi jirtay Turkiga 13 sano ka hor, sannado badan ka dib, sida lagu sheegay bayaannada ay soo saareen shirkadda, shirkadda waxay sii wadi doontaa inay noqoto laba duulimaad xamuul toddobaad kasta. Ku socota warka wargeyska Shalom [More ...]
Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Tunç Soyer wuxuu booqday Agaasinka Guud ee ESHOT iyada oo loo eegayo baaxadda barnaamijka xafladaha. Maareeyaha Guud ee ESHOT Erhan Bey iyo Kaaliyaha Guud Maareeyayaasha Turgay Akkaya, Kader Sertpoyraz iyo Kerim [More ...]
Nidaamka Isgaarsiinta Mevlana Isgoyska Taraafikada Waa La Cusbooneysiiyay; Shaqada ay bilaabeen Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu ee isgoysyada si loo yareeyo cufnaanta taraafikada ee gobolka ayaa wali socota. Diyaarso jaangooyooyinka meelo badan kahor [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii wadaysaa inay tusaale u noqoto degmooyinka kale iyadoo la dadaaleysa kordhinta shaqada haweenka. Agaasinka Guud ee EGO, wuxuu ku shaqeeyaa amarka Duqa Magaalada Mansur Yavaş, wuxuu shaqaaleysiiyaa gaadiidka dadweynaha [More ...]
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Tunç Soyer ayaa baaray mashruuca Flamingo Nature Park bilowga Gediz Delta. Iyada oo ay weheliso dayactirka xeebta ee Mavi aimsehir, magaaladu waxay higsaneysaa inay magaalada ka dhex abuurto garoon dabiici ah. [More ...]
Ururka Lighthouse wuxuu ku noolaan doonaa magaca Ahmet Alp Taşdemir, oo ah 2017-sano jir howl gal gaar ah oo booliska ka shahiiday howlgalka ka dhanka ah ururka argagixisada PKK ee Diyarbakır sanadkii 26, ceel biyood uu ka furay Soomaaliya. Waxaa laga qoray ururka [More ...]
Agaasinka Guud ee ESHOT waxaa loo aasaasay inuu u adeego magaalada Izmir tiro balaadhan sida Korontada, Biyaha, Gaaska iyo Gaaska Gaaska, oo ku xidhan Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, oo leh miisaaniyad dheeri ah, sida TEK iyo İZSU. [More ...]
Duqa Magaalada Caabudwaaq Sakarya Ekrem Yüce, oo marti ku ahaa barnaamijka 'Su'aalo weydiinta' telefishanka tooska ah ee TV264, ayaa yiri: "Waxaan sameynay baaritaanno muhiim ah oo la xiriira nidaamyada tareenka fudud. Waxaan soo saareynaa warbixinno suurta gal ah. Waxaan ka shaqeynaa moodallo kala duwan. [More ...]
TCDD Covid-19 ayaa ku dhawaaqay in tareennada heer gobol iyo xawaare sare la joojiyey khatarta cudurka. Laga bilaabo Maajo 28, waxaa lagu dhawaaqay in adeegyo tareen xawaare sare leh mar kale la adeegsan doono (Sida laga soo xigtay wareegtada madaxweynaha, waxay ahayd in ay bilaabato 20ka May) [More ...]
Caddadka canshuurta ee laga adeegsaday isweydaarsiga shisheeye iyo ka ganacsiga dahabiga ayaa la kordhiyay. Sida ku xusan go’aanka lagu daabacay Gazette rasmiga ah, heerka Caymiska Bankiga iyo Canshuurta Macaamiisha (BSMV) ee lagu dabaqay macaamisha sarrifka lacagaha qalaad wuxuu kor uga kacay 2 kun ilaa 1 boqolkiiba. bangiyada [More ...]
Ururka Duulista Hawada ee Turkiga waxaa la aasaasay bishii Febraayo 16, 16, 1925 bilood ka dib markii lagu dhawaaqay Jamhuuriyadda, iyadoo la amrayo Hogaamiyaha Sare Mustafa Kemal Atatürk oo hoos yimaada magaca "Turkish Airplane Society". Ujeedada aasaasida bulshada; Duulista ayaa aasaastay warshadaha duulista ee Turkiga [More ...]
Taariikhda waxaa lasiiyay qaybtii ugu dambeysay ee deyntii ay maanta qaadatay oo ay siisay Turkiga maanta, May 25, 1954 wadooyinka tareenka ee Rumelia.
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu, Turkiga, ayaa ku nuuxnuuxsaday in dunidu tahay marin istiraatiiji ah oo ka dhexeeya wadada u dhexeysa xarumaha dhaqaalaha iyo ilaha alaabada ceyriinka ah, “Dalkeenna, awoodda dhaqaale ee ay ku bixiso goobta juquraafi ahaan, manaafacaadka siyaasadeed iyo dhaqan. [More ...]
Rakaabka Qaaliga ah, In kasta oo aafada masiixiga ah ee Kovid-19 uu sii wado saameynta nolosheena, waxaan guryahayaga ugu dabaal degi doonnaa Ramadaanka Ramadaanka, mana awoodi doonno inaan booqanno kuwa aan jecel nahay si aan u ilaalino caafimaadkeena iyo caafimaadkeena. Caafimaadka hel… Adoo la wareegaya masiibadaada [More ...]
Waa kuma TLC Mürsel? : "1 Maalmood Guur" (90 Day Fiancé), oo lagu faafiyo kanaalka TLC oo sheegaya sheekooyinka dadka wadanka ku soo galay fiisaha K-90, kaas oo loo qaatay dadka isqaba ee ajnabiga ah inay abaabulaan xaflad guur. [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu cabsi galiyay Juneska Gesi maalinta koowaad ee xayiraadda afarta maalmood ah. Xilliga Gesi Junction wuxuu noqonayaa mid aad u shaqeeya oo qulqulka taraafikada ayaa aad u tiro badan. [More ...]
Billy Hayes (Abriil 3, 1947; New York, USA) waa qoraa Mareykan ah, jilaa, agaasime iyo geesi run ah filimka Midnight Express. Kadib markii lagu qabtay xashiish ka timid dalka Turkiga ayaa qortay buug kaas oo uu kaga sheekaynayo maalmihii uu xabsiga ku jiray. Dhalasho [More ...]
In kasta oo wadooyinka aan loo ilaalin sannado badan ciriiriga taraafikada ee magaalada Bursa waxay heleen raaxo ugana mahad celinayaan bandowyada, kooxaha sii wadaya shaqadooda si aan kala go 'lahayn maalmaha Eve iyo Ciid, waxay sidoo kale baabi'inayaan jihada Gökdere - Merino. [More ...]
Maalgelinta deegaanka ee ay xaqiijisay Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli ayaa ka dhigtay xeebaha magaaladu inay gebi ahaanba u muuqdaan sidii hore. Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo sii wadata shaqadeeda si taxadar leh isla markaana leh 6 xeebood oo magaalada ku leh calan buluug ah, [More ...]